Microsoft Launcher အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（24.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Microsoft Launcher
Microsoft Launcher သည်သင်၏ Android device တွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်သင့်အားအသုံးမပြုသည့်မူလမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံအသစ်ကိုပေးသည်။ Microsoft Launcher သည်သင့်အားသင်၏ဖုန်းတွင်အရာအားလုံးကိုစုစည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစာများသည်သင်၏ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ရှုရန်, စာရင်းပြုစုရန်လွယ်ကူစေသည်။ သွားအပေါ်စေးကပ်မှတ်မှတ်စုများ။ သင် Microsoft Launcher ကိုသင်၏မူလမြင်ကွင်းအသစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သောအခါသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်သင်၏လက်ရှိမူလမြင်ကွင်းအပြင်အဆင်ကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ သင်၏ယခင်ပင်မစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားရန်လိုအပ်ပါသလား။ သငျသညျဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်!
ဤ Microsoft Launcher ဗားရှင်းသည် dark mode, ကိုယ်ပိုင်သတင်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများနှင့်0န်ဆောင်မှုပေးသောဝန်ဆောင်မှုများနည်းပါးခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များပြုလုပ်ရန်ဤ Microsoft Launcher ဗားရှင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် fluent fluent forr.
Microsoft Launcher အင်္ဂါရပ်များ
သင်၏ဖုန်းကိုညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်အလင်းရောင်ကို အသုံးပြု. မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Launcher ၏မှောင်မိုက်သောအခင်းအကျင်းနှင့်အတူအနိမ့်အလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုပါ။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် Android'sdark mode settings နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဤအက်ပ်ကို install လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကိုသင်သဘောတူသည် (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= 246338) နှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ (http://go.microsoft.com/fwlink/microsoft.com/fwlink/Linkid=248686) ။
Microsoft Launcher ကို download လုပ်ခြင်းသည် default launcher ကိုအစားထိုးရန် (သို့) device launchers အကြား toggle လုပ်ရန်ရွေးချယ်မှုပေးသည်။ Microsoft Launcher သည် Android ဖုန်းတွင်အသုံးပြုသူရဲ့ PC မူလမြင်ကွင်းကိုပုံတူပွားခြင်းမရှိပါ။ အသုံးပြုသူများသည် Google Play မှအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကို0ယ် / သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်။ Android 7.0 လိုအပ်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Microsoft Launcher 6.210602.1.994630
Kay Thi account နဲ့ သုံးနေတာ/ star ပေးတာ Thi Thi အမည်နဲ့ ပေါ်လာတယ်။ ထူးခြားနေ၏။ သာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေ။